ဒီကနေ့မှာ (၁)လပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သမီးလေး Shandra ကို ခုလိုကာလကြီးမှာ ရင်တမမနဲ့ပြုစုနေရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မေမေခင်လွှမ်း – Askstyle
ဒီကနေ့မှာ (၁)လပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သမီးလေး Shandra ကို ခုလိုကာလကြီးမှာ ရင်တမမနဲ့ပြုစုနေရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မေမေခင်လွှမ်း
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ….ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ မင္းသားေခ်ာ စည္ၿဖိဳးနဲ႔ခင္လႊမ္းဟာဆိုရင္ ပရိတ္သတ္အားေပးမႈကို အသီးသီးရရွိထားတဲ့သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။စည္ၿဖိဳးနဲ႔ခင္လႊမ္းတို႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့သမီးဦးရတနာေလးကိႏၷရီေရႊစည္ကို ဇြန္လ (၁၄)ရက္ေန႔ကေအာင္ျမင္စြာနဲ႔ေမြးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။ျဖဴေဖြးတုတ္ခဲၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့သမီးေလးကို ေဖေဖစည္ၿဖိဳးကလက္ကမခ်နိုင္ေလာက္ေအာင္ခ်စ္မဝျဖစ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။
သမီးဦးေလးခင္လႊမ္းကေမြးတဲ့တစ္ဦးတည္းေသာေျမးဦးေလးကို ႏွစ္ဖက္ဖိုးဖိုးဖြားဖြားေတြကလည္းအခ်စ္ပိုေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။စည္ၿဖိဳးနဲ႔ခင္လႊမ္းကိုခ်စ္ၾကတဲ့ပရိတ္သတ္ေတြရဲ့ဆုေတာင္းေမတၱာေတြေၾကာင့္ မိခင္ေရာကေလးပါက်န္းက်န္းမာမာရွိေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။
ဒီကေန႔မွာဆိုရင္လည္း ခင္လႊမ္းခဲ့ သမီးေလးShandra ေလးဟာ (၁)လျပည့္သြားၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ေမေမခင္လႊမ္းက “Shandra ေလး ၁လျပည့္ပါၿပီ . ဒီလိုေခတ္အခါႀကီးမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ျပဳစုရတာ ရင္တမမနဲ႔ပါပဲ #Shandrainmyheart” ဆိုၿပႌး သမီးေလးရဲ႕ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ပံုရိပ္ေလးေတြကို ျပသလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့သမီးငယ္ေလးShandra ရဲ့ပုံရိပ္ေလးကို ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးအားတစ္ဆင့္ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္..။ဖတ္ရႈေပးတဲ့ Celebrity Platforms ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။
Source ; Khin Hlwan Facebook Acc
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ မင်းသားချော စည်ဖြိုးနဲ့ခင်လွှမ်းဟာဆိုရင် ပရိတ်သတ်အားပေးမှုကို အသီးသီးရရှိထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။စည်ဖြိုးနဲ့ခင်လွှမ်းတို့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးဦးရတနာလေးကိန္နရီရွှေစည်ကို ဇွန်လ (၁၄)ရက်နေ့ကအောင်မြင်စွာနဲ့မွေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။ဖြူဖွေးတုတ်ခဲပြီးချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့သမီးလေးကို ဖေဖေစည်ဖြိုးကလက်ကမချနိုင်လောက်အောင်ချစ်မဝဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။
သမီးဦးလေးခင်လွှမ်းကမွေးတဲ့တစ်ဦးတည်းသောမြေးဦးလေးကို နှစ်ဖက်ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေကလည်းအချစ်ပိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စည်ဖြိုးနဲ့ခင်လွှမ်းကိုချစ်ကြတဲ့ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာတွေကြောင့် မိခင်ရောကလေးပါကျန်းကျန်းမာမာရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။
ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်း ခင်လွှမ်းခဲ့ သမီးလေးShandra လေးဟာ (၁)လပြည့်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ မေမေခင်လွှမ်းက “Shandra လေး ၁လပြည့်ပါပြီ . ဒီလိုခေတ်အခါကြီးမှာ ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစုရတာ ရင်တမမနဲ့ပါပဲ #Shandrainmyheart” ဆိုင်္ပြီး သမီးလေးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြသလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့သမီးငယ်လေးShandra ရဲ့ပုံရိပ်လေးကို ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးအားတစ်ဆင့်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Celebrity Platforms ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။